इन्टरनेटको सबै भन्दा सानो स्वरुप घरमै कसरी तयार गर्ने ? How to prepare small internet at home? इन्टरनेटको सबै भन्दा सानो स्वरुप घरमै कसरी तयार गर्ने ? How to prepare small internet at home? - Asyan Tech Udhyog
Posted6months ago / Internet, Web, World Wide Web
अहिले सम्म इन्टरनेट भन्ने वित्तिकै तपाईको मोबाइलमा चल्ने नमस्ते वा एनसेल वा अरु सिमको डाटा सम्झिन सक्नु हुन्छ । साथै तपाईको घरमै रहेको नेपालका इन्टरनेट कम्पनीहरु जस्तै ओल्डलिङक, सुविसु, भायानेत, आदिको राउतर सम्झिन सक्नु हुन्छ । जसले काठमाडौंबाट इन्टरनेट तपाईको घर–घर सम्म उनीहरुको साखा कार्यालयबाट बितरण गरीएको हुन्छ । इन्टरनेट कम्पनीहरु पनि इन्डियाबाट इन्टरनेट ल्याएका हुन्छन् । इन्डियाले पनि समुद्र हुदै अन्य राष्ट्रबाट ल्याएका हुन्छन् । यसरी चलेको हुन्छ इन्टरनेटको सञ्जाल चलेको छ ।
तर सबै भन्दा सानो स्वरुपको इन्टरनेट हाम्रो घरमै बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागी तपाईलाई चाहिने भनेको दुईवटा कम्प्युटर, इन्टरनेट केबल वा ल्यान केबल वा प्याचं केबल वा इन्ठरनेट केबल र सजिलोको लागि “डुक्टु’’ सफप्टव्यर चाहिन्छ ।
अब तपाईले माथि चित्रमा दिए बम्बोझिम जडान गर्नपर्ने हुन्छ । दुबै कम्प्युटरमा “डुक्टु” सफ्टव्यर चलाउनु होला । त्यसपछि डुक्टु सफ्टव्यरमा एकअर्काको कम्प्युटरको नाम देख्न सक्नुहुनेछ । कम्प्युटरको नाममा क्लिक गर्नु भयो भने तपाई फाईल, फोल्डर वा मेसिज पठाउनु हुन्छ भनेर अप्सन आउछ । यसरी तपाई आफ्नो घरमै बसेर इन्टरनेटको सानो स्वरुप आफ्नो घरमै तयार गर्न सक्नुहुन्छ ।
इन्टरनेट, इन्टरनेट केबल, एनसेल, कार्यालय, नमस्ते
के हो सरभर भनेको ? कसरी काम गर्छ यसले ? What is Server? How does it work?